Myanmar Online Writers Association - Home
Myanmar Online Writers Association
Welcome From MOWA
MOWA ကိုတည်ထောင်ရခြင်း အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ ယနေ့လက်ရှိအချိန်မှာ အွန်လိုင်းမှာ စာပေရေးသား သူများဟာ ဘလော့တွေပေါ်မှာ တင်မကတော့ပဲ၊ social ဆိုက်တွေပေါ်မှာ၊ forum တွေပေါ်မှာ တခြားအနုပညာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ဆိုက်တွေ ပေါ်မှာပါ ရေးသား လာနေကြပါပြီ။ ဒီတော့ ဒီလို အွန်လိုင်းမှာ စာပေရေးသားနေတဲ့ သူတွေအားလုံးကို တစုတစည်းထဲ ဖြစ်စေချင်တာရယ်၊ နောက်ပိုင်း အလျင်းသင့်ရင် စာပေ၀န်ဆောင်မှု မျိုးတွေကို ဒီအသင်းအနေနဲ့ ပြုလုပ်ပေး သွားမှာပါ။ အွန်လိုင်းစာပေလောက နဲ့ ပြင်ပ စာပေလောကရဲ့ ပေါင်းကူးတံတားလေး ပေါ့ဗျာ။ အသင်းကိုလဲ အပြင်ဘက်မှာပါ တရားဝင်ဖွဲ့သွားဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ လောလောဆယ်တော့ အသင်းကို စတင် တည်ထောင်ဆဲ ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များကို လက်ခံနေပါတယ်။ အသင်းတခုရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း လစဉ်ကြေးတွေနဲ့ ရံပုံငွေ ထူထောင်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။နောင်အခါမှာ portal တခု တည်ဆောက် သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ စာပေအကျိုးသယ်ပိုး နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
MOWA က social site တခုလား? MOWA က social site တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ MOWA ဟာ အွန်လိုင်းမှာ စာပေ ရေးသားနေသူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ထောင်ထားတာပါ။ အသင်းအဖွဲ့ ပုံစံမျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားတာဖြစ်ပြိး လောလောဆယ် ကိုယ်ပိုင် ဆိုက်တခု မတည်ထောင်နိုင်မှီ ning မှာ ယာယီပြုလုပ်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းစာရေးသူတွေဆိုတော့ ဘလော့ဂ်ကာတွေကို ရည်ရွယ်တာလား? ဘလော့ဂ်တွေကို ချည်းရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘလော့ဂ်ကာတွေ အတွက် အသင်းအဖွဲ့က MBS ဆိုတာ ရှိပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ စင်ပြိုင်လုပ်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဒီ Myanmar Online Writers Association ဆိုတာ ယနေ့အွန်လိုင်းမှာ စာပေရေးသားနေသူတွေ၊ ဥပမာ- MySuboo, Ainmet, Myatkhinnthit နှင့် တခြားသော ဆိုက်တွေပေါ်မှာ စာပေ အနုပညာ ရေးသားနေတဲ့ အွန်လိုင်းစာရေးသူတွေ အားလုံးကို ပေါင်းစည်း စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ အွန်လိုင်းမှာ စာပေရေးသား နေတဲ့ မည်သူမဆို ဒီအသင်းမှာ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
Myanmar Online Writers Association (MOWA) ကို ဘယ်လို အသင်းဝင်ရပါသလဲ? http://myanmaronlinewriters.weebly.com မှာ အသင်းဝင်နိုင်ပါတယ်။ (အသင်းဝင်တဲ့ အခါမှာ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာရေးတဲ့နေရာ (web address or profile link) တွေကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။) ဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ (၀က်ဘ်လိပ်စာတွေ) မှန်ကန်ပြည့်စုံမှု ရှိမရှိဆိုတာ ကျွန်တော်တို့က စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိသည် မည်သည့် ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် စာပေရေးသား နေသူဖြစ်ကြောင်း ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါဆို MOWA ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ? ယနေ့ နည်းပညာရဲ့ ပြောင်းလဲမှု ပြယုဂ်အဖြစ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေဟာ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ကိုယ်ဝါသနာပါရာ စာပေအနုပညာတွေကို ရေးသား ဖန်တီးလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လူငယ်တွေနဲ့ အင်တာနက် ယဉ်ကျေးမှုဟာ တစတစ တိုးတက်လာနေပါတယ်။ ဒီလို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စာပေ ရေးသားနေသူတချို့ရဲ့ လက်ရာတွေဆိုရင် ပြင်ပစာပေနယ်မှာလဲ စာရေးသူတွေ အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ လက်ရာမွန်တွေ အဖြစ် မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုစာရေးကောင်းတဲ့သူတွေ တချို့ဟာ ပြည်ပရောက်နေသူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြင်ပ စာပေနယ်နဲ့ ထိတွေ့ခွင့်မရကြတဲ့ သူတွေ ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အွန်လိုင်းမှာ စာရေးနေသူတွေဟာ တခြားအလုပ်ကိုင်များ လုပ်ကိုင်ရင်း ၀ါသနာ အရ သာ စာပေရေးသား နေကြတာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီလို လက်ရာမွန်တွေ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ရွက်ပုန်းသီး စာရေးသူတွေကို မျိုးဆက်သစ် စာရေးသူတွေ အဖြစ် စာပေနယ်မှာ ၀င်ဆံ့လာအောင် ပြုလုပ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရယ်၊ အွန်လိုင်းမှာ စာပေရေးသားနေတဲ့သူတွေကို တစုတစည်းတည်း အင်အားတရပ် အဖြစ် ရပ်တည်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရယ်ကြောင့် Myanmar Online Writers Association ကို တည်ထောင် ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Association ဆိုတော့ အသင်းဝင်တွေကို အသင်းဝင်ကြေး ကောက်ခံမှာလား? အသင်းဝင်ကြေးကောက်ခံမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ အသင်းဝင်တွေ တွေ့ဆုံပွဲ မပြုလုပ်ရသေးတဲ့ အတွက် မညှိနှိုင်းရသေးပါဘူး။ အသင်းအတွက် အသင်းဝင်ကြေးကောက်ခံတယ် ဆိုတာ အွန်လိုင်းယဉ်ကျေးမှုဟာ ရှေ့ဆက်ပြီး ယခုထက် ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ပဲ ရှိပြီး MOWA ကို ရေရှည် ရပ်တည်သွားနိုင်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ် ကုန်ကျနိုင်မယ့် ကုန်ကျစရိတ်တွေကို တင်ပြရရင်-
o official site (portal) တခု တည်ထောင်ရန် ရံပုံငွေ
o အွန်လိုင်းစာပေဆု ပေးအပ်ရန်
o စာကြည့်တိုက် တည်ထောင်ရန်
စတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ သုံးစွဲဖို့ အသင်းရံပုံငွေ လိုအပ်နေပါတယ်။
အသင်းဝင်တွေကို MOWA က ဘယ်လိုအကျိုးပြုမှာလဲ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေက ဘာတွေလဲ? အခုလတ်တလော ကတော့ အသင်းဝင်များထဲမှ ပြည်တွင်းမဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေကို စာမူပို့ချင်တယ်ဆိုရင် အသင်းက တာဝန်ယူ ပို့ပေးပါ့မယ်။ အသင်းဝင်များရဲ့ စာမူတွေကိုလည်း အလျင်းသင့်ရင် စာအုပ်ထုတ်ဝေ ပေးသွားဖို့လဲ ရှိပါတယ်။ ၂လတစ်ကြိမ် စာပေစကားဝိုင်း ပုံမှန် ပြုလုပ်သွားပါမယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အွန်လိုင်းမှာ တနှစ်တာ အတွင်း အကောင်းဆုံးစာပေဆု များကိုလည်း စာပေအမျိုးအစားလိုက် ချီးမြှင့်ပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းဝင်များ ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် စာကြည့်တိုက်ကိုလဲ တည်ထောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။
Myanmar Online Writers Association ကိုဘယ်လိုပုံစံဖွဲ့စည်းမလဲ? ဒီကိစ္စကိုလဲ အသင်းဝင်တွေ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ညှိနှိုင်း သွားဖို့ရှိပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်း စဉ်းစားထား တာတော့ အသင်းတစ်ခု ပုံစံနဲ့ညီအောင်
o အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမှူး
o အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်း သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
(အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလဲ အသင်းဝင်များထဲမှ အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် အများ၏ သဘော ဆန္ဒအရသာ ရွေးချယ်တင် မြှောက်သွားမှာပါ။)